नैतिकता हुनेहरुले आफूमाथि आरोप लाग्दा राजीनामा दिएका उदाहरण छन्ः विश्वकान्त मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता - Pahilo News
० पछिल्लो समयमा न्यायालयमा देखिएको असहज अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
न्यायालयको स्वाभिमानमा भएको ह्रास आजको दिनमा एक्कासी आएको होइन । विगतदेखि नै क्रमशः ह्रास हुँदै गइराखेकै थियो । कानुन व्यवसायीहरुको सम्मेलन र न्यायाधिशहरुको सम्मेलनले पनि अदालतभित्र भ्रष्टाचारको व्यापकता छ भन्ने कुरा पारित गरेको छ । पहिले–पहिले अदालतभित्र विकृति र विसंगति छ भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्थ्यो, पछि अदालतभित्र भ्रष्टाचार पनि छ भन्ने कुरा सम्मेलनहरुले ठहर गर्दै आएको अवस्था हो । अदालतको सबैभन्दा बलियो आधार भनेको जनआस्था हो । अदालत भनेको जहिले पनि अन्तिम सहाराको निकाय हो । तर अहिले त्यो चिज रहेन । अदालतबाट मैले न्याय पाउँछु, शान्ति सुरक्षा पाउँछु भन्ने कुराको जनभावना नरहेको हुनाले अदालतको अहिलेको अवस्था जनआस्थाको केन्द्रभन्दा पनि मान्छेहरु अन्याय पर्दा पनि बरु सहने, बरु आफैंले इन्साफ लिन खोज्ने तर अदालत नजाने प्रवृत्ति धेरै हावी भएर आइरहेको छ । यो कानुनी राज्यको दर्शन र दृष्टिकोण जुन छ, त्यसको ठीक विपरीत हुकुमी शासन र संस्कारको प्रतिविम्बको रुपमा देखापरेको छ ।
० प्रधानन्यायाधिश आफैं छानविनको घेरामा तानिएको विषयलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ?
अहिलेको प्रधानन्यायाधिशको बारेमा प्रधानन्यायाधिश भएपछि मात्र विवाद आएको कुरा होइन । पहिले नै आएको हो । हाम्रो संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था छ । त्यो पनि कुनै प्रभावकारी निकाय होइन । प्रधानन्यायाधिश पनि बनाउने, उसको हुर्मत पनि लिने, जनआस्थाबाट गिराउने अनि फेरि उसलाई न्यायाधिश वा प्रधानन्यायाधिश बनाउने हाम्रो चलन छ । संसदीय सुनुवाइको जुन व्यवस्था छ, त्यो बिल्कुल गलत भइराखेको छ । सुनुवाईमा कुरा आइसकेपछि त्यसलाई छानविन गरेर निक्र्यौलमा पुगेर प्रधानन्यायाधिश हुने र नहुने टुङ्ग्याउने भए एउटा कुरा हुन्छ । त्यहाँ नै राजनीतिकरण हुन्छ । आजसम्म जतिसुकै उजुर परे पनि, आलोचना गरे पनि सुनुवाई समितिले रोकेको उदाहरण छैन । एकातिर पद्धति पनि बेठीक छ र अर्काे कुरा सबै वृत्तमा मै खाउँ, मै लाउँ भन्ने प्रवृत्ति बढेर गयो । त्यसले गर्दा पनि असन्तोष बढेको छ ।
० प्रधानन्यायाधीशमाथि नै इजलासले छानविनको आदेश दिइसकेपछि अबको कोर्स कुन रुपमा अगाडि जानुपथ्र्यो ? जस्तो कतिपयले नैतिकताको आधारमा राजीनामाको कुरा पनि उठाए ?
नैतिकताको कुरा चाहिँ व्यक्ति विशेषले अनुभूति गर्ने कुरा हो । नेपालकै उदाहरण हेर्नुहुन्छ भने २०३० सालमा बिजुली सर्ट भएर सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा घरमा सुतिरहेको कीर्तिनिधि विष्टले त्यसको जिम्मेवारी लिएर राजीनामा गर्नुभयो । भारतमा रेलवे मन्त्री लालबहादुर शास्त्री थिए । त्यो बेलामा राति घरमा सुतेका थिए । विहारको एउटा स्टेशनमा रेल जुध्यो, उनले राजीनामा दिए । कतिपय न्यायाधिशहरुले पनि आफूमाथि टिकाटिप्पणी भएपछि राजीनामा दिएका छन् । जोसँग नैतिकता छ, जो स्वाभिमानमा बस्छ, उसले राजीनामा दिने हो । कानुनी बाध्यता चाहिँ भएन । दिनुपर्ने प्रचालन हो । दिने नदिने कुरा त व्यक्ति विशेषमा भर पर्छ ।
० जसको बारेमा छानविन हुनुपर्ने हो, उसैले इजलाश तोक्दा फैसला प्रभावित हुँदैन र ?
सोधे पनि, नसोधे पनि प्रधानन्यायाधिशको इजलाशमा धेरै अनियमितता छ भन्ने कुरा त व्यापक रुपमा कानुन व्यवसायीको बीचमा, जनताको बीचमा र राजनीतिक दलहरुको बीचमा पनि आइराखेका छन् । यो दुःखको कुरा हो । भारतमा पनि प्रधानन्यायाधिशले आफुखुसी गरे भनेर वरिष्टतम चारजना न्यायाधिशहरुले उनको अनियमितता र स्वभावको बारेमा प्रेसमिट नै गरे । न्यायपालिकालाई जोगाउनलाई न्यायपालिकाका न्यायाधिशहरुले गरेका जुन बलमिच्याइँ र अनियमित कार्यहरु छन्, विसंगति र विकृतिहरु छन्, त्यसलाई उजागर गर्नु त सबैको दायित्व हो । त्यो गर्छ भने त्यो त छानविन हुनुपर्छ ।
० केही वकिलले त उनको इजलाश समेत बहिस्कार गर्छौं, नैतिक हिसाबले इजलाशमा बस्नै मिल्दैन भनेका छन् नि ?
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा एउटा वकिलले बहिस्कार गर्ने र अर्को वकिलले बोकेर हिँड्ने दोहोरो चरित्र छ । न्यायपरिषद् न्यायाधिशहरुको आचरणबारे अनुगमन गर्ने र तिनीहरुलाई दण्ड पुरस्कार दिने भनेर जन्मिएको संवैधानिक अंग हो । कानुन व्यवसायीको लागि वार काउन्सिल भन्ने जन्मिएको छ, त्यसले वकिलहरुको अभिलेख राखेर गलत गर्नेलाई सजाय गर्ने भन्ने छ । यो दुइवटा निकायले न्याय सम्पादनमा स्वच्छता ल्याउनका निम्ति भूमिका खेल्नुपर्ने र यी दुइवटा निकायले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा कारबाहीको त कुरै छाडौं, विसंगति, विकृति र भ्रष्टाचार मौलाएर गइरहेको छ । त्यसैले यो त्रुटि न्यायपालिकामा पनि छ, न्यायाधिशभित्र पनि छ र कानुन व्यवसायीभित्र पनि छ । त्यसैले यसलाई सुधार्न दह्रो स्वच्छ नेतृत्व नभई हुँँदैन ।
० जति पछि हुँदै गयो उति न्यायापालिकाको गरिमा घटिरहेको छ, यसलाई निराकरण गर्ने उपायहरु के हुन सक्ला त ?
सबै नीतिको माउनीति राजनीति हो । उनीहरुले नै न्यायाधिशहरु नियुक्ति गर्ने हो । उनीहरु ठिक भयो भने जम्मै कुरा ठिक हुन्छ । राजनीति ठिक भएन भने जतिसुकै गरे पनि आफ्ना एसम्यान र भ्रष्ट मान्छेहरुलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया हुन्छ । अनि उनीहरुबाट हामीले ठूलो नैतिकता र जनआस्थाको विकासको कुरा गर्न सकिँदैन ।
० भनेपछि राजनीतिकरण र दलीय प्रभावले न्यायालय गाँजिएको हुनाले हामी यो समस्यामा पर्दै गएका हौं ?
सबैतिर हेर्नुस् न उस्तै छ । शिक्षा हेर्नुस् समाप्त भयो । अदालत हेर्नुस् समाप्त नै छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र बलियो हुनका लागि यस्ता स्वतन्त्र न्यायापालिका जो हामी भनिरहेका छौं, यो निकाय दह्रो हुनुपर्छ । यसको नेतृत्व लिने मान्छे असल र इमानदार हुनुपर्छ । दृष्टिकोण भएको मान्छे हुनुपर्छ । जनताले पत्याउने र आस्था भएको मान्छे हुनुपर्छ । न्यायाधिशहरु पनि त्यस्तै मान्छे हुनुपर्छ । भर्ना गर्ने बेलामा आफ्ना हनुमानदासहरु भर्ना गर्ने अनि खोज्ने बेलामा चाहिँ राजनीतिक दलहरुले आदर्श न्यायापलिकाको कल्पना गरेर पनि हुन्छ त ? निवुवा रोपेर आँप फल्छ र ? अमिलो रोपेपछि अमिलो नै फल्छ । त्यसैले यो जम्मै परिणाम राजनीतिक कारणबाट भएको छ । राजनीतिक परिणाममा सुधार नआइकन, सरकारमा सुधार नआइकन यो कुनै पनि अंगहरु सोचेजस्तो हुनै सक्दैन ।
एउटा पार्टीका सांसद कुनै विदेशी कूटनीतिज्ञको नाम लिँदै भन्छन्, वाम एकता नफुटाउँदासम्म निर्वाचन परिणाम सार्वजन..
अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपाध्यक्ष, नेकपा (एमाले) ० निर्वाचनपछि पनि राजनीतिक डेडलक उस्तै छ, कहिले निकास पाउला यसले ?..
यो एउटा ध्रुवीय प्रतिक्रियाजस्तो भएको छ । जसलाई अहिले कांग्रेसले लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेको छ तर त्यो त लोकतन्..